Semalt Explique Les Bases De L'enyocha SEO Usoro Site Site
Search Engine Optimization (SEO) Nyochaa nyochaa na saịtị weebụ bụ SEO enyi na enyi na nsogbu ga-mma. Ọ na-ekwenye na saịtị ahụ dị mma maka mgbanwe ọ bụla na-emepụta na ọrụ. SEO Audit gụnyere usoro nyocha, na ibe, hors page, competitives et par mot clé.
Jack Miller, onye isi nke ahịa ahịa nke Ọkachamara , kọwapụtara ihe dị na nyocha SEO, kwuru na-eme na ihe mere ọ bụ indiel maka nkwado nke saịtị.
Ịdị mkpa nke enyocha SEO
Ọ bụrụhaala na Google na-eme ka oge niile na-agbanwe agbanwe, ọ ga-abụrịrị na ndị ahịa ga-eme mgbanwe ngwa ngwa iji gbanwee ike. Nnyocha nke nyocha na-enye gị ohere ịmekwu nleta na ebe na-enyere gị aka ịgbaso oge mmepe nke ọrụ. Ọ na-aba uru ma ọ bụrụ na ị ga - amalite ịrụ ọrụ ọhụrụ.
Accessibility Weebụsaịtị ga-enwe ọdịnaya na ịchọgharị ọchụchọ ga-enwe ohere. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ nke a, search engine agaghị enwe ike ịchọpụta ọdịnaya gị, nke na-emetụtaghị ọkwa. Otú ọ dị, Robots.txt ngwa ngwa nwere ike ịmepụta nsogbu dị otú a n'ụzọ dị mfe site na ịmatakwu niile peeji nke a na-egbochi ya. Ọ na-agụnyekwa nchọpụta nke code d'état HTTP. N'ihe banyere nsụgharị akwụkwọ (nsụgharị peeji nke), usoro nyochaa na-enyere gị aka ịdegharịa peeji nke mbụ na mbido. All pages must be interconnect pour assure na onye ọ bụla na-anọchi anya na ọ bụghị nyocha ọ bụla.
Indexation La verification de l'accessibilité garantit na search engines na-achọ ọdịnaya. Akwukwo ndi ozo na peeji nke na-eme ka o doo anya na saịtị a, nke na - eme ka njirulu nke njide na - eme ka njikwa.
Site na arụmọrụ Ọsọ ọsọ bụ primordiale ụgbọ ala ọtụtụ ndị na-anaghị eche na ị na-ejikọta ya na saịtị ma ọ bụrụ na ọ na-ewe oge na-ejikọta ya na Internet connection. Nke a na-emetụta ọtụtụ nleta nke spectateurs..
Nhazi nke nyochaa SEO
E nwere ụzọ abụọ ị ga - esi hụ SEO maka otu weebụsaịtị.
Spécialistes de la SEO, dị ka ụlọ ọrụ anyị, na-eme nchọpụta nyocha site na iji ngwa na ngwa. N'ịchọpụta akụkụ ọ bụla nke saịtị ahụ, ha na-edozi otu akụkọ nke na-egosi nsogbu niile ha chọtara, na-enyekwa ndụmọdụ maka ụzọ isi dozie nsogbu ahụ.
Ngwa automatica pour audit (SEO)
Ọ nwere ụfọdụ tools pour mener l'audit SEO. Ha na-ewe oge, ọ ga-abụrịrị ntachi obi, ezi uche na usoro echiche. Nke a bụ maka ndị confiantes bụ ndị nwere solide compétences usoro.
Ngwá ọrụ maka usoro nyocha
Ịkpọ ụda Frog ou Xenu Ha na-enyocha ọnụọgụ nke ọnụọgụgụ peeji nke, na-achọpụta na ị nwere ike ịmepụta, redirections internes na duplication.
IIS SEO Toolkit Na-enyocha accessibility nke saịtị na-atụ aro ka ị ga-esi gbakwunyere ndị ọzọ.
Ụlọ elu ọkachamara na-atụle akụkụ nke usoro na ọdịnaya nke arụmọrụ SEO nke gị na saịtị, ị na-enye njikọ na ndị recommandations.
Pingdom DNS Control Aka na DNS nyochaa, DNS njikwa na DNS DNS nhazi nsogbu.
Bipụtara ya Chọpụta ụlọ ọrụ nke etiti ma kọwaa ntọala nsogbu dị na ntinye.
GTmetrix Otu ngwaọrụ nke na-achọpụta ihe ndị na-eme ka nkwụnye ụgwọ kwadoro web saịtị. Ọ na-agụnyekwa akụkọ ihe mere eme iji mee ihe.
Google Webmaster Tools Chọpụta nsogbu dị na peeji nke 22,
Mgbe ị na-enyocha SEO site na Weebụ, jide n'aka na echebara ihe niile dị na ya. Ihe mgbagwoju anya na uzo nke nyocha nke a bu ihe ndi na-enyere aka nyocha. Site n'inyocha ihe nyocha nke multifactorial nyocha, ị nwere ike ịmepụta ezi usoro nhazi maka nkwado nke mkpokọta weebụ gị.